SEO PowerSuite: Quickzọ 5 Dị Ntanetị iji Nweta Nsonaazụ Maka Ndị Nwere Aka Na saịtị | Martech Zone
Satọde, 18 Juun 2016 Satọde, 18 Juun 2016 Ọnye na -bụ Aleh Barysevich?
Marketingzụ ahịa dijitalụ bụ akụkụ ahịa nke ị na - enweghị ike ileghara anya - ya na isi ya bụ SEO. O nwere ike ịbụ na ị maara mmetụta dị mma SEO nwere ike inwe na akara gị, mana dị ka onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye nwe saịtị ahụ, ị ​​na-elekwasị anya na ebe ndị ọzọ, yana ịme SEO ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa nwere ike isi ike. Azịza ya bụ iji sọftụwia ịzụ ahịa dijitalụ nke na-agbanwe agbanwe, nke nwere ọgaranya, ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Tinye SEO PowerSuite - ederede zuru ezu nke ngwa oru iji mezuo SEO gi. Na nke a, anyị ga-ekpughe ụzọ ise ị ga - esi jiri SEO PowerSuite bulie SEO gị ika.
Gbaa mbọ hụ na a ga-achọta gị
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka edepụta saịtị gị ma depụta ya nke ọma, ọ dị mkpa ime ka ọ dịrị nfe ka Google nwee ike iri ari saịtị gị wee chọpụta ọdịnaya ya. N'iburu nke ahụ n'uche, nhazi saịtị na-arụ ọrụ dị mkpa na ndenye aha. Dị nnọọ mfe, ebe nrụọrụ weebụ nwere usoro ezi uche dị na ya ka ọ dị mfe maka engines ọchụchọ ịkpụ na ogo.
Iji SEO PowerSuite, ị nwere ike ikpebi ogo ogo saịtị gị. Ihe dị iche iche na-abata - dịka ọmụmaatụ, peeji ndị dị mkpa kwesịrị ịnweta site na ibe ụlọ, na ntanetịime blog kwesịrị ijikọ onwe ha mgbe ha dị mkpa. Nwere ike iji SEO PowerSuite's Weebụ WebSite ịlele ụdị ihe ahụ.
Nanị gaa na ebe nrụọrụ weebụ Auditor WebSite, wee pịa na peeji nke ngalaba. Mgbe ahụ, lee Njikọ Esịtal Peeji kọlụm iji mata peeji nke saịtị gị enweghị njikọ dị n'ime ya na-atụ ha aka.
Nke a ga - enye gị ndepụta nke ederede na ibe nke ị ga - achọta ụzọ iji jikọọ na mpaghara ndị ọzọ nke saịtị gị.
Lelee Na Gị Oké Mpo akwụkwọ Weebụ Ibu Ibu Ngwa Ngwa ezu
Ọsọ weebụ nwere mmetụta dị ukwuu na ogo maka ihe abụọ:
Ọsọ saịtị bụ ihe dị n'ọkwa, nke pụtara na webụsaịtị dị nwayọ na-agbadata ala.
Ọsọ saịtị gị nwere mmetụta kwụ ọtọ na ọnụego ibiaghachi.
Google na engines ọchụchọ ndị ọzọ na-etinye ihe dị mkpa na akara ngosi nke onye ọrụ. Otu ihe mgbaàmà dị otú ahụ bụ ọnụego ibiaghachi, nke ọsọ ọsọ saịtị nwere ike imetụta n'ụzọ dị egwu - ọtụtụ ndị mmadụ ga-eche naanị sekọnd ole na ole (n'ọtụtụ) maka saịtị ịkwanye tupu ha agbapụ.
Iji WebSite Auditor, ị nwere ike ịchọpụta peeji ndị dị na weebụsaịtị gị na-eji nwayọ nwayọ. Gaa na Ibe akwukwo modul nke ihe nyocha ihe Weebụ Weebụ, ma lelee ngalaba ọsọ peeji iji hụ ma ibe gị gafere ule ọsọ Google:
You've matachaa peeji ndị ị na-eji nwayọọ nwayọọ aga, i nwere ike mee ihe iji dozie nsogbu ndị ahụ.
Lelee Njikọ Ahụhụ Ahụhụ
Njikọ dị ala nwere ike itinye saịtị gị n'ihe egwu ntaramahụhụ Google, nke metụtara SEO, bụ ihe nro kachasị njọ gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ izere ntaramahụhụ sitere na Google, ịkwesịrị inwe ike ịchọpụta njikọ ndị na-emerụ ahụ ma were usoro iji kwụsị ha.
Na SEO PowerSuite si SEO SpyGlass, ị nwere ike ịchọpụta njikọ na-emerụ ahụ na profaịlụ backlink gị na-akpaghị aka ma gbochie ntaramahụhụ njikọ Google.
Ihe ikwesiri ime bu ka gaa SEO SpyGlass toolu ma banye na saiti gi. Mgbe ahụ, gaa na Njikọ ntaramahụhụ taabụ ma pịa na backlinks ngalaba, nke a na-ahụ n'aka ekpe. N'ebe ahụ, ị ​​ga-enweta plethora nke stats dị mkpa, gụnyere 'ntaramahụhụ ntaramahụhụ' maka ngalaba gị niile.
N'okpuru ebe a bụ ule ọsọ ọsọ maka Martech Zone. Dị ka ị pụrụ ịhụ, o nweghi Nsogbu Ahụhụ ọ bụla, emeela nke ọma!
Kasị mma, ị nwere ike ịlele ntaramahụhụ egwu maka njikọ gị na naanị otu ịpị. Yabụ, ma ọ bụ maka njikọ onye ọ bụla ma ọ bụ otu otu njikọ nke backlinks, ị ga - ahụrịrị ntaramahụhụ ntaramahụhụ gị na bọtịnụ.
Gbaa nnwale enyi na enyi
Dika nchọta mkpanaka na-amalite itule na ọnụ ọgụgụ nke desktọọpụ, omume enyi ugbu a aghọwo obere ọkwa maka Google na engines ọchụchọ ndị ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ na gị na saịtị ahụ na-kachasị maka mobile, ọ nwere ike na-ezighị ezi mmetụta gị ogo (ghara ikwu banyere ọrụ ahụmahụ).
You nwere ike iji Auditor Weebụ iji mepụta nnwale enyi na enyi na weebụsaịtị gị, iji chọpụta ma ọ gafere ụkpụrụ Google. Ọ bụrụ na saịtị gị agafeghị ule ahụ, ị ​​ga-enweta ndụmọdụ banyere otu esi eme ka saịtị gị ka mma karịa - dịka ọmụmaatụ, onye na-agụ ya ekwesịghị ịbịgharịa ma ọ bụ pịgharịa na ngwaọrụ mkpanaka ya iji gụọ ọdịnaya peeji gị.
Gaa na Nnyocha saịtị ngalaba nke Web Aite Auditor tool to check your site.
Ọ bụrụ na saịtị gị enwetaghị akara ngosi, ihe kachasị mma ị ga - eme bụ ịhazigharị weebụsaịtị gị ka ọ bụrụ ihe ọ ga - eme (ma ọ bụrụ na ọ dịbeghị). Ntinye ego na imewe - ọkachasị mkpanaka enyi na enyi - nwere ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ na nsonaazụ SEO.
Mepụta nyocha saịtị
Enwere ike inwe nsogbu dị oke mkpa na weebụsaịtị gị nke ị na-amaghị, ma ọ bụ na ịnweghị oge iji chọpụta onwe gị. Ihe ndị a nwere ike imetụta ikike na ogo saịtị gị. Na SEO PowerSuite, ị nwere ike ịnweta ngwaọrụ, dịka Nnyocha saịtị ngwá ọrụ, nke nwere ike ịkọwapụta isi isi ọ bụla na saịtị gị na akpaghị aka.
Iji mezuo a Nyochaa saịtị, mepee ngwa Auditor nke Weebụ, wee malite nyocha nke weebụsaịtị gị site na iji Nnyocha saịtị ngwaọrụ:
Ngwaọrụ a na - achọpụta nsogbu ọ bụla nwere ike belata ọkwa gị, kụziere gị otu esi edozi nsogbu, ma mee ka ị mata maka nsogbu ọ bụla dị na peeji. Ọ bụ ezigbo ike stof.
SEO nwere mmetụta dị ukwuu na ika gị nke na o siri ike ileghara anya. Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’ị na - agba mbọ itinye mgbasa ozi SEO gị, lelee SEO PowerSuite nke ngwa ọrụ dị mma.
Ha na-edozi usoro nke SEO, na-eme ka ọ dịrị gị mfe na ọsọsọ iji chọpụta nsogbu ọ bụla saịtị gị nwere, wee nwee ike inyere gị aka ị bulie ogo ogo saịtị gị.
Iji SEO PowerSuite, ị nwere ike
Gbaa mbọ hụ na saịtị gị dị optimally ahaziri
Lelee na ebe nrụọrụ weebụ gị ibu ngwa ngwa
Lelee saịtị gị backlink ntaramahụhụ nsogbu
Gbaa a enyi na enyi ule
Mee otu oditi zuru ezu
N'eziokwu, anyị emetụla aka nke iceberg n'isiokwu a, mana nke dị n'elu ga-ezuru gị iji nwee nsogbu! Ị nwere ike budata SEO PowerSuite n’efu na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Budata SEO PowerSuite n’efu!
Tags: nyochaa backlinkbacklink ntaramahụhụ nsogbunjikọ ihe egwuenyi na enyimobile uleikesearch engine njikarịchaAseo mkpọsaseo poweruiteseo nhazioditionye nyocha webusaitiọsọ ọsọ
Akụkụ nke mbụ na-akụ n'ụlọ. Ndị ọchụnta ego na-arụsi ọrụ ike na-agba ahịa ahụ ma ndị ahịa na-etinye aka na ịchekwa ụgbọ mmiri ahụ. Ha niile nwere ihe ngwa ngwa iji gaa ọtụtụ oge anaghị ebute SEO ụzọ. Ilekwasị anya na ya bụ ihe ịma aka ma ụzọ ndị a ị keere bụ ezigbo enyemaka maka ndị naanị jikọtara obere oge maka SEO mana ka na-achọ ka isiokwu ha na ọkwa kachasị elu.
Nov 22, 2016 na 6:06 AM
Naanị iji mesie ike etu oge loading si dị mkpa, mgbe ndị mmadụ pịa njikọ, ha ga-eche ihe dị ka sekọnd ise ka ewepụta peeji ahụ nke ọma tupu ịpị bọtịnụ azụ na ihe nchọgharị ha ma nwalee ọdịmma ha na nsonaazụ ọchụchọ ọzọ! Mee ka saịtị gị dị mfe dịka o kwere mee na Flash-n'efu!